कालाे बिरालोले बाटो काट्दा किन अशुभ मानिन्छ ? यस्तो छ यथार्थ ! - fairnepal.net
राशिफल / वास्तु समाज
कालाे बिरालोले बाटो काट्दा किन अशुभ मानिन्छ ? यस्तो छ यथार्थ !
काठमाडाैं । बिरालोसँग जोडिएको केहि अशुभ अन्धविश्वास हो या सत्य यस कुरालाई लिएर प्राय: मानिसहरु अन्योलमा रहने गर्दछन् ।
जब कुनै बिरालोले बाटो काट्छ तब मानिसहरु त्यहिं रोकिने गर्दछन् र आफू भन्दा अघि अरु कोही जाउन भनेर प्रतीक्षा गर्ने गर्दछन् ।
कहिले-काही मानिसहरु डरले आफ्नो बाटो नै बदल्ने गर्दछन् । आखिर यस्तो किन ? यसको व्याख्या यस्तो रहेको छ ।
बिरालोलाई मांसाहारी, जंगली र अशुभ जानवर मानिएको छ । नारद र वराह पुराणको शुभ-अशुभको बारेमा बिरालोलाई लिएर केही व्याख्या गरिएको छ ।
पुराण अनुसार बिरालोलाई देखिनु, बाटो काट्नु, रुनु र घरमा आउनु-जानु अशुभ मानिएको छ । बिरालोले घरमा नकारात्मक ऊर्जा ल्याउने गर्दछ ।
त्यसैले बिरालोलाई घरमा पाल्नु अशुभ मानिन्छ । बिरालो आउदा अशुभ घटनातर्फ इशारा गर्ने गर्दछ ।
बिरालोलाई केवल नेपालमा मात्र नभएर अन्य देशहरुमा अशुभ मानिने गरिन्छ । जर्मनीमा बिरालोले दायाँबाट बायाँतर्फ बाटो काट्नु अशुभ मानिन्छ ।
जानकारीको लागी मध्य युगमा यसलाई चुडेलको सहायक पनि मानिने गरिन्थ्यो । यसको अलावा यस्तो पनि मान्यता रहेको छ कि यदि बिरालो तपाइको अगाडिबाट टाढा जान्छ भने सम्झनुहोस् तपाइको राम्रो समय चलिरहेको छ ।
यस्तै यूरोपको कैयौं भागहरुमा कालो बिरालो देखिनु अशुभ मानिन्छ ।
कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्दा फल मिल्छ ? जान्नुहोस्
हेरौँ, हप्ताको कुन बार कुन-कुन देवी-देवताको पुजा गरिन्छः कुन बारमा कुन देवी(देवताको पूजा गर्दा फल मिल्छ ?
हिन्दु धर्ममा आइतबारलाई ‘सूर्य देव‘को बार मानिन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले एक छाक मात्र खाना खानुपर्दछ र खानामा नुनतेल मिसाउनुहुँदैन।
व्रत बस्नेहरूले रातो वस्त्र लगाउँदा सूर्यदेव प्रसन्न हुन्छन् भने पुजा गर्दा रातो रङ्गको फूल चढाउनुपर्दछ।
सोमबार ‘शिवजी‘को दिन हो। यस दिनमा शिवजीको पुजा-आरधना गरे शिवजी चाँडै नै खुसी हुन्छन्। यस दिनमा शिव मन्दिर गई विशेषतः ‘अर्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शिवाय’ मन्त्र जप्नुपर्दछ।
अझै सोमबारको दिन शिवजीको पुजा गर्नेबेला शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भई मागेको वर दिने विश्वास गरिन्छ। कुमारी स्त्रीले राम्रो वर पाउनका लागि शिवजीको पुजा गर्ने गर्दछन् भने विवाहित स्त्रीले
आफ्नो परिवारमा सुखशान्ती र पतिको लामो आयुको लागि शिवजीको पुजा गर्दछन्। यस दिन व्रत बस्दा एक(छाक मात्रा खानुपर्दछ भने खानामा नुन-तेल मिसाउन मनाही छ। (शिवजीलाई यी ५ पवित्र वस्तुहरू चढाउनुहुँदैन)
‘बुध‘ ग्रहको लागि समर्पित बार नै बुधबार हो। यस दिन विशेष गरी विथाल-देव (कृष्णको अवतार)को पुजा गरिन्छ। पुजा गर्दा तुलसीको पातले गर्नुपर्दछ।
कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ मानिन्छ। साथै यस दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले आफूले चाहेको फल पाउने विश्वास गरिन्छ।
कलाकार पारिवारीक जीवन जिउने क्रममा आपसी मतभेद त हुन्छ नै । तर कतिपय मतभेद बढ्दै जाँदा सम्बन्ध नै पुर्ण बिराम लाग्नसक्छ ।
राष्ट्रवादी भनेर चर्का कुरा गर्ने भिम रावललाई लाग्यो…
घरमा यी चिजहरू राख्नु मानिन्छ अशुभकाे प्रतीक
सौभाग्‍यको संकेत मानिन्छ यी चिज, के तपाईलाई थाहा छ…
Previous Previous post: तानसेन–तम्घास सडकदैनिक ११ घण्टा बन्द
Next Next post: बागमती प्रदेशबाट एमालेका ३२७ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन (सूची सहित)
धार्मिक महोत्सवमा रू. २ कराेड आर्थिक संकलन
एमाले सचिवमा गोकर्णले पाए लोकप्रिय मत, हेर्नुस् कसले कति मत पायाे ?
उपाध्यक्ष जित्नेमा अष्टलक्ष्मीको सबैभन्दा बढी मत, बादलको सबैभन्दा कम, कसकाे कति मत ?
एमालेको अध्यक्षमा पुन: ओली निर्वाचित, कसकाे कति मत ?
केपी ओली विजय नजिक, कसकाे कति मत ? ( मत गणना अपडेट)
नेपाली कांग्रेसको ५७ जिल्लामा सभापति चुनिए, कुन जिल्लामा कुन पक्षका ? सूचीसहित
मतदान सकिएलगत्तै भीम रावलले भने- आचार संहिता विपरीत केही कुरा भएका छन्